I-china abakhiqizi bepompo yokucima umlilo i-Diesel nabaphakeli | IKAIQUAN
I-XBC uchungechunge lwe-diesel fire pump luyimishini yokuhambisa amanzi eyenziwe yinkampani yethu ngokusho kwe-GB6245-2006 pump pump standard standard. Isetshenziswa kakhulu ohlelweni lokuphakelwa kwamanzi ngomlilo lukaphethiloli, imboni yamakhemikhali, igesi yemvelo, isitshalo samandla, isikhumulo semikhumbi, igesi, isitoreji.
I-XBC uchungechunge lwe-diesel fire pump luyimishini yokuhambisa amanzi eyenziwe yinkampani yethu ngokusho kwe-GB6245-2006 pump pump standard standard. Isetshenziswa kakhulu ohlelweni lokuphakelwa kwamanzi ngomlilo lukaphethiloli, imboni yamakhemikhali, igesi yemvelo, isitshalo samandla, isikhumulo semikhumbi, igalaji likaphethiloli, ukugcinwa, ukwakhiwa okuphezulu nezinye izimboni nezinsimu. Ngesikhungo sokuhlola iziqu zomkhiqizo womlilo (isitifiketi) somnyango wokuphathwa kwezimo eziphuthumayo, imikhiqizo ifinyelele ezingeni eliphambili eChina.
Iphampu yomlilo yenjini yedizili ingasetshenziselwa ukuhambisa amanzi acwebile ngaphandle kwezinhlayiya eziqinile ezingaphansi kwama-80 ℃ noma uketshezi olunezakhiwo zomzimba nezamakhemikhali ezifana namanzi. Ngesisekelo sokuhlangabezana nezimo zokulwa nomlilo, kuzobhekwa izimo zokusebenza kokuphakelwa kwamanzi asekhaya kanye nokukhiqiza. I-XBC ipompo yomlilo yenjini kadizili ingasetshenziswa hhayi ohlelweni oluzimele lokuphakela amanzi ngomlilo, kodwa futhi nakuhlelo olufanayo lokuphakelwa kwamanzi lokulwa nomlilo nempilo, kepha nasohlelweni lokuphakelwa kwamanzi ngokwakhiwa, umasipala, izimboni nezimayini, ukuhlinzekwa ngamanzi kanye nokuhambisa amanzi, umkhumbi, ukusebenza kwensimu nezinye izikhathi.
- Ububanzi obubanzi bohlobo lwe-spectrum: isigaba esisodwa sokudonsa ipompo ye-centrifugal, ipompo le-multistage enezingqimba, isiteji esisodwa sokudonsa impompo, ipompo le-shaft ende nezinye izinhlobo zepompo zikhethelwa iyunithi, ezinokuhamba okuningana kwengcindezi.
- ukusebenza okuzenzakalelayo: lapho iyunithi yepompo yamanzi ithola umyalo wesilawuli kude, noma ukwehluleka kwamandla kagesi, ukwehluleka kwepompo kagesi nezinye izimpawu (zokuqala), iyunithi lizoqala ngokuzenzekelayo. Imishini inokulawulwa okuzenzakalelayo kwenqubo yohlelo, ukutholwa kwedatha okuzenzakalelayo nokubonisa, ukuxilongwa kwamaphutha okuzenzakalelayo nokuvikela.
- Inqubo yokubonisa ipharamitha: bonisa isimo samanje nemingcele yemishini ngokuya ngesimo sokusebenza samanje semishini. Isibonisi sesimo sifaka phakathi ukuqala, ukusebenza, ukusheshisa, isivinini, (ukungasebenzi, isivinini esigcwele) ukuvala shaqa, njll. Amapharamitha enqubo afaka isivinini, ingcindezi kawoyela, izinga lokushisa lamanzi, izinga lokushisa lamafutha, ibhethri yebhethri, isikhathi sokusebenza esihlanganayo, njll.
- Umsebenzi we-alamu: qala ukwehluleka kwe-alamu, i-alamu yengcindezi kawoyela ophansi nokuvala, i-alamu ephezulu yokushisa kwamanzi, i-alamu yokushisa kawoyela, i-alamu yamandla webhethri ephansi, i-alamu yezinga likaphethiloli eliphansi, i-alamu egijimayo kanye nokucisha.
- Izindlela ezahlukahlukene zokuqala: ukuqala kwesandla mathupha nokulawula ukumisa, ukuqala okukude nokumisa ukulawula kwesikhungo sokulawula, ukuqala nokusebenza ngamandla kagesi.
- Isiginali sempendulo yesimo: inkomba yokusebenza, ukwehluleka kokuqala, i-alamu ebanzi, ukuvalwa kokuphakelwa kwamandla kagesi nezinye izindawo zesiginali yesimo sempendulo
- Ukushaja okuzenzakalelayo: kokubekwe eceleni okujwayelekile, isistimu yokulawula izodada ngokuzenzekelayo ibhethri. Lapho umshini usebenza, i-generator yokushaja yenjini kadizili izobiza ibhethri.
- Ijubane lokusebenza eliguquguqukayo: lapho ukugeleza nenhloko yempompo yamanzi kungahambelani nezidingo zangempela, isivinini esilinganisiwe senjini kadizili singalungiswa.
- Isifunda sokuqala sebhethri: lapho ibhethri elilodwa lihluleka ukuqala, lizoshintshela kwenye ibhethri.
- Isondlo ibhethri free: asikho isidingo ukwengeza electrolyte njalo.
- Ijazi lamanzi ngaphambi kokushisa: iyunithi kulula ukuqala lapho izinga lokushisa elincane liphansi.
Isivinini: 990/1480/2960 ngomzuzu
Amandla ebanga: 10 ~ 800L / S.
Ingcindezi ububanzi: 0.2 ~ 2.2Mpa
Ingcindezi esemkhathini:> 90kpa
Izinga lokushisa eliphakeme: 5 ℃ ~ 40 ℃
Umswakama ohlobene womoya: ≤ 80%
Langaphambilini XBD Series Kuqondile Axis Firefighting Pump
Olandelayo: Izinsiza kusebenza ze-W Seeries Stabilized Pressure Equipment
I-KZJXL Series Icwilise Amaphampu E-Slurry